Olee otú Naghachi ehichapụ Video on iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5s / 5c / 5 / 4s / 4 e
Olee otú Naghachi ehichapụ Video on iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5s / 5c / 5 / 4s / 4
M wee a video nke nwa m na m iPhone 6 na mmadụ na mberede ehichapụ ya. Dị ụzọ ọ bụla iji nweta ya azụ? - Helen
Iji iPhone ọrụ, ahụmahụ a abụghị obere. na otu akụkụ, iPhone-eweta oké na ezi ọrụ ahụmahụ, ma na n'akụkụ nke ọzọ, data ọnwụ ka ọrụ na-agba ọsọ a oké ize ndụ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-ama mere nri nzọụkwụ, na-abịa ezi ohere iji nyere gị aka naghachi-ehichapụ iPhone foto ma ọ bụ video. Wondershare Dr.Fone Maka iOS-enyere gị aka naghachi-ehichapụ videos kpọmkwem site iPhone, iTunes na iCloud ndabere.
Atọ Solutions naghachi ehichapụ Videos on iPhone
iPhone Video Iweghachite Software
Na-enye gị ụzọ atọ iji weghachite furu efu vidiyo si na iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5s / 5c / 5 / 4s / 4 / 3GS
Naghachi ehichapụ vidiyo si na igwefoto mpịakọta na ngwa.
Weghachite photos kpọmkwem site iPhone na iTunes / iCloud ndabere.
Selectively ego na-agbake vidiyo na mbụ mma.
Weghachite ihe karịrị videos, nakwa kọntaktị, oku na-aga log, ozi, foto, ndetu, wdg
Gụọ-na-na n'ihe ize ndụ-free.
1: Naghachi video si iPhone
2: Naghachi video si iTunes
3: Naghachi video si iCloud
Part 1: Naghachi ehichapụ Video kpọmkwem site iPhone
Nzọụkwụ 1 Jikọọ gị iPhone na kọmputa na-ike iṅomi ya
Ẹkedori Wondershare Dr.Fone maka iOS na kọmputa gị, na jikọọ na gị iPhone na kọmputa na a dijitalụ USB. Mgbe gị iPhone ahụrụ, pịa na "Advanced mode" ka ịgbanwee gaa na a elu scanning mode. Wee soro ndu ke window ike iṅomi gị iPhone furu efu videos na ya.
Rịba ama: The elu mode bụ nanị maka iPhone 4 / 3GS, iPad 1 na iPod aka 4 ugbu a. Ọ bụrụ na ị na-eji ọzọ ụdị, dị ka iPhone 6 ma ọ bụ iPhone 5s, ị nwere ike ozugbo ike iṅomi ya maka data na ya, ma ọ bụ nanị ịgbanwee gaa na ngwọta na akụkụ 2 ma ọ bụ akụkụ 3.
Nzọụkwụ 2 Preview na-agbake ehichapụ vidiyo si na iPhone
Mgbe Doppler, gị niile data na gị iPhone ọ bụ furu efu si iPhone na-hụrụ ma e depụtara ke haziri ahazi edemede. Iji chọta gị videos, ego Igwefoto Roll, bụ nke nwere weghaara foto na vidiyo. Akara ndị ị chọrọ na pịa Naghachi bọtịnụ na ala na-azọpụta ha niile na kọmputa gị na otu Pịa.
Cheta na: E wezụga na-agbake ehichapụ data gị iPhone, Dr.Fone maka iOS nwekwara ike mbupụ data ka na gị iPhone. Ọ bụrụ na ị chọrọ naanị azụ gị ehichapụ n'anya, ị nwere ike nụchaa Doppler N'ihi site na iji bọtịnụ na n'etiti-n'elu nke mpio naanị ngosi ehichapụ ihe.
Nkebi nke 2: Iṅomi ma wepụ iTunes ndabere naghachi Videos maka iPhone
Nzọụkwụ 1 Họrọ ngwaọrụ ndabere ka ike iṅomi
Mgbe na-agba ọsọ usoro ihe omume na kọmputa gị, pịa naputa site na iTunes ndabere File n'elu, na ị ga-ahụ na windo n'okpuru. Ugbu a, ị dị n'ihu nke ndabere faịlụ maka ngwaọrụ. Nanị ịhọrọ onye gị na iPhone na pịa Malite iṅomi wepụ ọdịnaya site na gị iPhone ndabere faịlụ.
Rịba ama: The ọnụ ọgụgụ nke ndabere faịlụ ị ga-esi ebe a na-adabere na otú ọtụtụ Apple ngwaọrụ ị na synced na iTunes n'ihu.
Nzọụkwụ 2 naghachi ehichapụ iPhone videos
Mgbe iṅomi dị n'elu, dum ndabere ọdịnaya na-amịpụtara na kwa egosipụta. Ị nwere ike ịlele video nke dị na .mpeg format ke ofụri ofụri, na pịa Naghachi n'elu menu na-echekwa ya na kọmputa gị.
Nkebi nke 3: weghachite Lost iPhone Videos si iCloud ndabere
Nzọụkwụ 1 Download na ike iṅomi gị iCloud ndabere
Họrọ naputa site na iCloud ndabere File mgbe launching usoro ihe omume. Mgbe ahụ banye na gị Apple ID. Ị ga-ahụ ihe omume na-egosi niile iCloud ndabere faịlụ na akaụntụ gị na ndepụta. Họrọ onye ị chọrọ wepụ ibudata ya. Mgbe ahụ, ị nwere ike na-ike iṅomi wepụ ya n'ebe ahụ.
Cheta na: Mgbe ị na-eme nke a, na-na-gị internet jikọọ.
Nzọụkwụ 2 naghachi ehichapụ iPhone vidiyo si na iCloud
Mgbe iṅomi akwụsị, ị nwere ike ịlele videos na edemede nke Igwefoto Roll na App Video. Tinye akà rà ha na pịa na Naghachi button na-azọpụta ha na kọmputa gị na otu Pịa.
Iji zere adịkwa gị iPhone video, ozugbo ndabere dị ezigbo mkpa na bara uru. Oge ọ bụla mgbe ị na-gbaa videos na gị iPhone, CHETA nkwado ndabere na mpaghara ha na kọmputa gị mbụ.
Text ọdịnaya: kọntaktị, ozi, Kpọọ akụkọ ihe mere, Kalinda, Edeturu, na-echetara, WahtsApp History, Safari na ibe edokọbara, App Documents
Olee otú ịnweta faịlụ na iCloud
Olee otú Jiri iCloud ndabere
N'anya Ozi I Kwesịrị Ịmara
> Resource> iPhone> Olee naghachi ehichapụ Video on iPhone